Khubaro Dhinaca Taariikhda Ah Oo Heshay Dhagxaan Muujinaysa In Dadkii Hore Ciyaari Jireen Kubadda
Khubaro ka socotay jaamacadda lagu magcaabo Michigan ee wadanka Maraykanka ayaa helay sawiro muujinaaya dad kubad ciyaaraaya, kuwaas oo ay ku sheegeen inay muujinayaan in dadkii hore ahaayeen kuwo ciyaara kubadda.
Sawiraddan ayaa muujinaaya dad ciyaaraaya wax ay ku sheegeen kubad, iyada oo ay sawiraddani ahaayeen kuwo la sawiray xadaaradii lagu magcaabi jiray Mayan Civilization, waxaana ka muuqda sawiraddan rag xidhan suuman oo eryanaaya wax u eg kubad oo buuran.
Sawiraddan ayaa la sheegay in la sawiray muddo dhan ilaa 600 ilaa 800 AD , iyaga oo khubaradda hawsha waday sheegay inay rumaysan yihiin in ay yihiin noocii ugu horeeyey ee sawiro ah , cadaynaayana in hadda ka hor adduunka lagu ciyaari jiray Kubad sidii la doono haloo ciyaaree, waxaana ka muuqda sawirka rag xidhan suuman .
Ciyaarta ayay sheegeen in la ciyaari jiray muddo laba toddobaad ah, iyada oo uu sawirku muujinaayo in qofka Kabtanka ah ee kooxda badisa wata laga jari jiray qoorta, iyada oo laga aaminsanaa inuu yahay qof fikir badan .
Christopher Andres oo ahaa madaxa kooxda samaysay baadhitaankan ee Sawirkan heshay ayaa qoraal uu ku daabacay wargeyska Daily Mail oo uu wargeyska Dawan kasoo xigtay ku sheegay in ay aaminsan yihiin in magaaladani ahayd mid ay dadkeeda iyo dadka xukumayaa lahaayeen xidhiidh dhexdooda ahaa .
Degaankan laga helay sawirkan ayaa ah mid ku yaala Badhtamaha America, waana magaalo jirta inta la qiyaaso muddo 3,000 sanno ah, waa magaalo ku taala buur dheer, waxaanay dhismeyaasheedu yihiin kuwo waaweyn oo hab casri ah loo dhisay.
Luuqadda dadka degaankaasi Deganaa ee Maya ahaa ayay khubaraddu sheegeen in ay ahayd luuqad gaadhey Qaraddaha Amerika dhamaan, ka hor waqtigii uu dhulkaas kusoo fiday Colombian-ku.
Khubaraddan ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in xadaaradani tahay tii ugu horeysay ee ciyaarta kubadda Cagta ama laga ciyaaro, sidoo kalena khubaradda ayaa sheegtay in Maya dadkan lagu magcaabo ay xukumi jireen magaalooyin badan oo boqortooyadaasi hoos iman jiray.
Sawirkan ayaa la helay sannadkii 2015 kii, iyada oo loo kala qaybiyey laba qaybood, waxaanay noqonaysay markii hore dherer ahaan 1.4 meter, iyo 0.7 meter oo joog ah.
Khubaradda ayaa sheegay in looxan ama sawirkan samayntiisu inay ku noqonayso Taariikh ahaan 18 May 716 AD , iyada oo kubadda waqtigaasi la ciyaari jirayna la odhan jiray Waterscroll Ocelot.